ဥပမာ လိုဂိုများ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > FAQ & Request Zone > အကြံပေးရန် > ဥပမာ လိုဂိုများ
View Full Version : ဥပမာ လိုဂိုများ
05-05-2008, 02:29 AM
--- အပြာရောင် စက်ဝိုင်းခြမ်း ပုံက ကမ္ဘာပေါ့ .... အရှေ့ ဘက်မှာ နေထွက်လာစ ပုံပါ .....။
--- အဖြူရောင် အလင်းတန်း က အရှေ့ အရပ် ကို ပျံသန်းပြီး ကြယ်ဆီသွားနေတဲ့ပုံပါ ..... အဓိပါယ် က တိုးတက်ခြင်း ဆီ တက် လှမ်းမယ့် အဓိပါယ်ပါ..။
---- အင်ဂျင်နီယာ နယ်ပယ် ကကျယ်ပြန့် လာတော့ ဘာသာရပ် တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ သင်္ကေတတွေ လိုက်ထည့်ပြီး ..အားလုံးပါအောင်ထည့်ဖို့ က မလွယ်လို့ဒီဒီဇိုင်း ကို ဆွဲလိုက်ရတာပါ ....။
--- အကြံဥာဏ်သစ်လေးများရှိရင် ပြောပေးပါ ...။ ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ စာရင် ခေါင်းတွေ အများကြီး ပေါင်းပြီး စဉ်းစားကြတာပေါ့ ...။
( .. အိပ်ပြီဗျို့..ပုံထိုင်ဆွဲနေတာ မနက် (၄)နာရီကျော်သွားပြီ...:P)
Transparent နဲ့ လိုချင်တယ် ဆိုလို့.. PNG format နဲ့ ပြောင်းပြီးထပ်တင်ထားပါတယ်... အမှန်က ကျနော် လဲ graphic software တွေ ကို မကျွမ်းပါ ...။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူ တစယောက်ယောက် လောက် က ပြင်ဆွဲပေးကြပါလား ...။ ကျနော့် ပုံ ကအကြမ်း ထည် မို့လို့ ပါ..။
အရမ်းကောင်းတယ် ညီလေးရေ ... :) :) :)
design လေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆန်းပါတယ်။ လှလည်းလှ၊ fancy လည်းဖြစ်တယ်။
အပြာရောင် စက်ဝိုင်းခြမ်း နဲ့ အဖြူရောင် အလင်းတန်း ရယ်၊ အဓိပ္ဗာယ်ရယ် လုံးဝပြောစရာမရှိဘူး။
Myanmar Engineer Forum စာတမ်း ရဲ့ နေရာ၊အရွယ်အစား၊ font style လေးကိုထပ်စဉ်းစားပေးပါဦးလား ...။
ငါ့ညီလေးပင်ပန်းသွားပြီ ... ။
အဖွဲ့ဝင်များဆီက design သစ်၊ အကြံဥာဏ်သစ်၊ အပြင် ဖြည့်စွက်ချက်လေးများဖြစ်ဖြစ် ပြောပေးကြပါဦးဗျာ ...။
အဲဒါကို လည်း စဉ်းစားနေတာဗျ ... အကြမ်းတော့ စဉ်းစားထားတယ်...ပြီးမှတင်လိုက်မယ်.... :)
ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုပါက transparent png or gif အဖြစ်ပြုလုပ်ပေးကြပါရန်.
အားလုံးအကြိုက် အကြမ်းဖျဉ်း ဒီဇိုင်းလေး တစ်ခုထွက်လာဖို့ အရင်အာရုံစိုက်ပေးကြပါ။
05-06-2008, 03:42 AM
ကျွှန်တော်ကတော့ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြုစေမယ့် သင်္ကေတလေးတစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပါစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုထပ်ထည့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကြယ်နေရာမှာ မြန်မာပြည်မြေပုံလေး ထည့်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ ;D
ဒီဇိုင်းလေးက မိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြယ်တွေ၊ လခြမ်းပုံတွေနဲ့ဆိုတော့ မွတ်စလင်အလံပုံစံနဲ့ တူနေသလားလို့။ ကျွန်တော်က ဒီဇိုင်းလည်း မဆွဲတတ်ပါဘူး၊ ဖိုတိုရှော့ပ်လဲ မရပါဘူး။ ဝင်ပြီး အာချောင်တာပါ။ မပြီးခင် ဗမာမမြင်စေနဲ့ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်လေ။ မြင်ရင်တော့ စိတ်ထဲရှိတာ ပြောမိမှာပဲ။ ဗမာပီသအောင်လို့.... ;D ဟိဟိ
05-06-2008, 04:56 AM
ဟဲဟဲ ... ဗမာ ပီသပါပေ့ ကိုMyMetro ရေ ... ။ ဟိုခမျာ ရင်ကျိုးသွားရင် ကိုMyMetro ရဲ့တာဝန်နော် ... သူတစ်ယောက်ထဲ ဆွဲနေရတာ ...။
ကျွန်တော်လည်း (ဝန်ခံရရင်) စတွေ့ကာစက 555 ကြော်ငြာ သွားသတိရမိသားဗျ။
ကဲ ... ဘာတွေ ပြောင်းပေးလိုက်ရင် မိုက်သွားမယ်ထင်လဲ ... ဆက်ပြောကြပါဦး ...
ကျွန်တော့ အတွေးက အလင်းတန်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ချင်တယ် ...
Design logo အပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်..
စိတ်ကူးရတဲ့ အချိန်မှာ ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါမယ်.. စကားကာထားတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့..
လောလောဆယ် Idea မထွက်သေးလို့.. လိုက်လေ့လာလိုက်ဦးမယ်..
Logo isadistinctive symbol ofacompany, object, publication, person service or idea.
logo တစ်ခုကို လုပ်ရာမှာ သုံးမျိုးတွေ့ရတယ်..
မိမိလုပ်လိုတဲ့ logo ကို စာလုံးအပြည့်အစုံနဲ့ လုပ်တာပါ..
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြောက်မြားလှတဲ့ လိုဂို symbol တွေကို လူတွေက သိနိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်..
အဲလိုအခက်အခဲကို စာလုံးအပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားတဲ့ လိုဂိုတွေက ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်..
သေချာမလုပ်တတ်ရင်တော့ အဲဒီလိုဂိုက သာမန်စာလုံးတွေ အဖြစ်သာရှိပြီးတော့ လူတွေရဲ့ အာရုံမှာ အမှတ်ရစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး..
logo ကို ပုံနဲ့ graphic , vector design နဲ့ လုပ်တာပါ...
ဥပမာ nike, apple,Mercedes-Benz
symbol နဲ့ Logo လုပ်တဲ့သူတွေက &#039;a picture is worthathousand words&#039; ဆိုတဲ့ idea ကို လက်ခံထားကြတာပါ။
Unicef logo မှာပါတဲ့ မိခင်နဲ့ကလေးပုံကို ကြည့်တာနဲ့ ဘာကို ဆိုလိုလဲဆိုတာ တန်းသဘောပေါက်ပါတယ်..
အဲနေရာမှာ unicef စာတန်းဆိုရင် အဲလောက်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး..
ဖော်ပြချင်တဲ့ အရာ.. ဥပမာ (ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှု) နဲ့ သုံးထားတဲ့ symbol မတူညီတဲ့ အခါတွေမှာ ဘာထုတ်မှန်း ဘာဝန်ဆောင်မှုမှန်း တန်းသိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စာသားအတိုကောက်နဲ့ symbol ကိုတွဲသုံးတာပါ...
အမြင်ဆန်းသစ်နိုင်တယ်... ထူးခြားတဲ့ stylish တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်.. မှတ်မိနိုင်စွမ်းအားတိုးစေနိုင်တယ်..
ဆရာကြီးဝင်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. လုပ်နေကိုင်နေတဲ့ သူတွေ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့
အကြုံပြုချက်များဟာ အင်မတန်မှ အထောက်အကူ ဖြစ်သလို လိုဂိုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဗဟုသုတ တိုးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို pozaw2005 ;)
ဟုတ်တယ်ဗျ နော် .... 555 လိုလို ... မွတ်စ် .... လိုလိုဖြစ်နေတယ်.... ဟီးဟီး.... ;D
နောက် တစ်ခြား တလွဲ Idea လေးတွေတော့ရှိပါသေးတယ်..... အချိန်ရမှတင်လိုက်မယ်...... ။
ကျနော် အရင်ဆုံးအခြေ ခံ စဉ်းစားတာက Engineer ရဲ့ အဓိပါယ်... ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီဖိုရမ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ...အဲဒီလို အဓိက ကျမယ့် အခြေခံ အဓိပါယ် တွေ ကို စဉ်း
စား ပါတယ် ... ။ စာသား ကိုမှ Symbol အဖြစ် ကိုပြန်ပြောင်း စဉ်းစား ပါတယ်... အဲဒီနည်းပါ ....။ ဆက်ပြီး အုန်း စားကြရအောင်ဗျို့...။
မညှာမတာဝေဖန်ကြေးနော် .... ;D
တကယ် တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာ။ :)
တစ်မျိုးတော့ရှိတယ်ဗျ၊ အရောင် ကို ကစားတဲ့ အမျိုး ... ဥပမာ - beeline
ကဲ ... ဆက်ပြောပေးကြပါဦး။ အဲဒီ ၃ မျိုးထဲက ဖိုရမ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး ဘယ်လို အမျိုးအစားဖြစ်မယ် ထင်ကြပါသလဲ။
နေရာ နည်းနည်းမှာပေါ်လွင်ဖို့တော့လိုမယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်လေးဖြစ်စေချင်တယ်။
စိတ်ကူး အသစ်လေးတွေထုတ်ကြပါဦး။ အခု ဒီဇိုင်း လေးကိုလည်း သုံးသပ်ပေးကြပါဦး ...။ :)
How About combination of those three style??
U know what I mean??
A symbol in the circle
and surrounded by words and Abbreviation.
Howdu think?
Thanks for your comment. dude! You can use any combination of those three types.
I have mentioned the basis type of logo to provide the thinking of designer. Logo depends on designer&#039;s idea and creativity.
Do not confuse between logo and seal.
A logo is typically designed to cause immediate recognition by the viewer. It&#039;satrademark.
A seal is an impression upon wax, wafer, or some other substance capable of being impressed.
Logo ကောင်းများ စဉ်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်..
05-15-2008, 01:45 AM
ကြိုက်တော့မကြိုက်သေးဘူး ... ဒါပေမယ့် ဆွဲမိသလောက် တင်ကြည့်ထားအုံးမယ်..... ပုံကြမ်းလေးပါပဲ ...
အကြံဥာဏ်လေးများပေးကြပါ ..... ။ ကျနော် Photoshop သိပ်မကျွမ်းပါ .. ခုမှ စမ်းတ၀ါးဝါး စဆွဲနေရတာပါ ....။ အဆင်ပြေတဲ့သူရှိရင် နဲနဲ
Modify လုပ်ပေးကြပေါ့ ....
05-15-2008, 03:11 AM
ok ညီလေး အစ်ကို photo shop လုပ်လိုက်မယ်..
.psd file ko attach တွဲပေးပါ..
အစ်ကို ကို photo shop ပေးပါ..
thz so much for ur thinking.
I want word M E F sorrouding in earth.
05-15-2008, 03:30 AM
အခု design လေးကောင်းပါတယ် ထင်လင်းရေ ...
- မြန်မာ က ကမ္ဘာမှာ ပေါ်လွင်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ် ...
- အဆက်မပြတ် ကြယ်တံခွန်တွေက နည်းပညာရပ် သစ်တွေ ...
ဒါကတော့ မနေ့ ကပုံကို ပြန်ရွှိုင်းထားတာ .... လှတယ်ဟုတ် ..??? :D
Photoshop file တွေတင်ပေးလိုက်ပြီ ကိုရေခါး .... Photoshop CS -4
Myanmar Engineer Forum ဆိုတဲ့စာကြောင်းကို အကွေးလေး (Bend) လုပ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးကို ပတ်ထားဖို့ က မလုပ်တတ်လို့ ဗျ ....အကို့ ဖာသာကြည့်လုပ်ပေတော့ ...။
နောက်ထပ်ဘာလုပ်ပေးရအုံးမလဲ ..။တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ပေါ့ .... :D
လှတယ်.. ဒါလေး ::) ::) ::)